Waa Waqtigii Shirkaddiina U Jeesan Lahaa | Martech Zone
Arbacada, Juun 3, 2009 Talaado, Disembar 31, 2013 Douglas Karr
Markay shirkaduhu sharaxayaan kala sarraynta maamulkooda, sida caadiga ah waxaad heleysaa jaantus aad u qabow oo shaqaalaha lagu qiimeeyo cidda ay u soo wargeliyaan. Kuwa awooda iyo magdhowgu had iyo jeer ku qoran yihiin dusha sare order siday u kala horreeyaan muhiimadda ay leedahay .
Maaha wax lala yaabo. Tani waxay dhigaysaa macaamilka meesha ugu hooseysa ee kala sareynta. Kuwaas shaqaalaha ah ee la macaamilaya rajooyinka iyo macaamiisha maalin kasta waa kuwa ugu mushaharka yar, kuwa aan khibradda lahayn, shaqo badan iyo aan muhiim ahayn ilaha shaqaalaha ee shirkadda. A horumarinta dhaqaajiya wakiilka adeegga macaamiisha iska laga bilaabo macaamilka iyo doorka maamulka halka ay arrimaha ka jiraan korodhay maamulaha. Tani waa inay dhacdaa maxaa yeelay shaqaaluhu ma haystaan ​​kalsooni, amar ama awood ay ku sameeyaan isbeddelada lagama maarmaanka u ah fuliyaan rajooyinka macaamiisha.
Miyaad weligaa tan ka fikirtay tan macaamiisha? Waxaad tahay muhiimad ayaa lagu kala saaray hoos ku kan shaqaalaha ugu hooseeya. Shaqaalaha leh mushaharka ugu hooseeya, muddada ugu yar iyo fursadaha ugu yar ee dallacsiinta ama fursadda. Fiican. Layaab maleh sababta macaamiisha waa kacdoon!
Saaxiib Kyle Lacy dhawaan dib u eegay buugga Jason Baer, ​​Qanciya iyo Beddel:
Erayada Jason, warbaahinta bulshada ayaa hada safka hore kaga jirta khibrada macaamiisha. Fikradaha iyo fikradaha noocyadu mar dambe laguma shaqeyn qolka guddiga (oo dad badani jeclaan lahaayeen inay aaminaan) laakiin waxaa lagu abuuray qolalkayaga lagu nool yahay, makhaayadaha, meelaha lagu kulmo, iyo teebabka.
Markaad aqriso guusha Zappos, Tony Hsieh wuxuu sii wadaa inuu muujiyo adeegga macaamiisha iyo sida wakiillada adeegga macaamiisha awood loogu siiyo inay caawiyaan macaamilka. Inkasta oo ay kujiraan salka kala saraynta magdhowga, Zappos ayaa si wax ku ool ah u beddelay kala sarraynta awoodda.
Waxaa la joogaa waqtigii dhammaan shirkadaha ay qodini lahaayeen warbixinta aan macquul ahayn iyo qaabdhismeedka awoodda oo ay u rogeen. Macaamiisha waa in lagu dhajiyaa dusha sare ee darajooyinkaaga, shaqaalaha safka hore waa in awood loo siiyo laguna kalsoonaado inay u gaaraan go'aannada saxda ah macaamilka. Maamulayaashaada, agaasimayaashaada iyo hogaamiyayaashu waa inay ahaadaan dhagaysto shaqaalahaaga macaamiisha ah ee wajahaya iyo sameynta istiraatiijiyado muddada-dheer ku saleysan talooyinkooda.
Inta badan ee aan u shaqeeyo shirkadaha, inbadan oo aan garwaaqsado in hoggaamiyeyaasha ugu waaweyni ay yihiin kuwa sida ugu habboon uga faa’iideysta kheyraadka, ka qaada isbaarooyinka, awood u siiya shaqaalaha, runtiina ay ka go'an tahay kasta macmiil Qol kasta oo guddi ah oo dhibtoonaya oo aan booqdo waxaa ka buuxa narcissists aftahan ah oo u maleynaya inay fure u ahaayeen guushooda, inay u qalmaan inay joogaan halka ay joogaan, iyo inay ka aqoon fiican yihiin macaamiisha.
Mid ka mid ah wax soo saarka cajiibka ah ee dhaqaale xumadan ayaa ah inaan aragno dadkan oo u daadanaya sida dukhsiga. Sidee ayuu darajooyinkaaga Macaamiil ugu muuqdaa meheraddaada? Ma waxay ku sugan yihiin dusha sare ama hoose ee silsiladda korantada? Ka fikir arrintaas.
Tags: Customermacmiil wadidtaageero macaamiishaHoggaanka
Pink: Markuu Ganacsigu Madhan Yahay
Jun 4, 2009 saacadu markay ahayd 1:21 AM
Nice post Doug. Cunto loogu talagalay fikirka maanta iyo da'da ee agaasimayaasha guud ee mushaharka badan iyagoo u maleynaya in shirkaddu ay tahay inay xirtaan boorsadooda. Macaamilku waa boqorka - maahan si kale.
Jun 4, 2009 saacadu markay ahayd 10:47 AM
Qoraal aad u xiiso badan, in kastoo xaqiiqda ay adagtahay in la fuliyo.
Jun 4, 2009 at 1: 39 PM
Guusha, horumarka iyo isbeddelka ayaa had iyo jeer ka adag in la fuliyo marka loo eego sida xaaladdu tahay iyo guuldarada. 🙂
Jun 4, 2009 at 2: 04 PM
Markii aan u shaqeynayay mid ka mid ah shirkadaha xamuulka qaada ee waaweyn, marwalba way ila yaabi jirtay sida ay had iyo jeer u dejinayaan siyaasadaha ku qasbaya iibka / adeegga dadka inay awoodaan inay u Yaraan macaamiisha. Oo waxay la yaabban yihiin sababta uu haynta aad ugu hooseeyo. Ganacsiyadu, iyadoon loo eegin “wax soo saarkooda” dhaqameed, waxay u baahan yihiin inay ogaadaan inay dhammaantood ku jiraan warshadaha adeegga.
Jun 5, 2009 saacadu markay ahayd 7:14 AM
Tuur qaabdhismeedka awoodda oo rog rog…
Qoraal dhalaalaya Doug iyo mahadsanid xiriirka.
Barta Jason Baer waxay u qalantaa abidkeed labaad waqtiga akhriska.